Oktobra 2016 - Websetnet
Isam-bolana: Oktobra 2016
Ahoana ny fanovana ny ID ID: Ahoana no hamoronana, hamerina, esorina na hamafa ID ID
Azoko atao ny manova na mamerina ny ID Apple ID aho? Ahoana no fomba hametrahako ID vaovao vaovao? Ary azo atao ve ny mamafa tanteraka ny ID ID Apple? Tsy afaka maka lavitra any amin'ny tontolon'ny vokatra sy ny serivisy Apple ianao raha tsy misy ID Apple. Soa ihany fa ...
Ny New MacBook Pro 2016 revue: Mandeha amin'ny laptop vaovao ambony any Apple
Ny New MacBook Pro Review 2016: Mandeha amin'ny laptop-n'ny laptop-n'i Apple vaovao Tonga soa eto amin'ny MacBook Pro 2016 famerenana. Raha tianao ny hamaky ny modely farany amin'ny taona lasa, vakio ny valin'ny 15in MacBook Pro (2.5GHz, 2015), 15in MacBook Pro (2.2GHz, 2015) ary 13in MacBook ...
Ny daty iCar namoaka tsaho, porofo ary sary
Hatramin'ny febroary 2015, nisy tatitra maro samihafa fa miasa ao anaty fiara i Apple izay "hanome ho an'i Tesla ho an'ny volany" taorian'ny Business Insider dia niteny tamin'ny mpiasan'ny Apple iray nahafantatra ny momba izany. Ity dia niaraka tamin'ny fahitana ny fiara nosoratana ho an'ny ...
Office ho an'ny Mac 2016, vidin'ny UK & mihoatra
Ny biraon'ny Mac 2016 dia natomboka tamin'ny Office 365 tamin'ny volana Jolay tamin'ny 2015, fa ireo mpampiasa Mac te hividy dika mivantana, fa tsy misoratra anarana, dia tsy maintsy niandry an'i Microsoft hametraka ny takelaka fandefasana. Izany dia nitranga tamin'ny farany tamin'ny Septambra, raha ireo mpampiasa Mac ireo ...
iPhone 7 revue: smartphone tsara tarehy ... raha tsy manana iPhone 6 ianao
iPhone 7 revize: smartphone iray tsara tarehy ... raha tsy efa manana iPhone 6s ianao Welcome to our iPhone 7 review. Raha aleonao mamaky momba ilay dikan-teny lehibe kokoa, jereo ny pejin'ny iPhone 7 Plus. Apple dia nanambara ny iPhone 7 tamin'ny 7 Septambra, miaraka amin'ny iPhone 7.
Fampahalalana ny NoNotifications 0.9 nalefa tamin'ny endrika vaovao
Ny NoNotifications dia endriky ny Ubuntu amin'ny fanakanana ny fampandrenesana NotifyOSD (izay ampiasain'ny Unity). Izany dia mety ho ilaina amin'ny fampisehoana, rehefa miasa, sy ny sisa, mba hisoroka ny fampandrenesana tsy mitaky. Naverina vao haingana ny mari-pamantarana, nitondra karazana vaovao. Miaraka amin'ny dikan-teny vaovao, misy ...
Fidio ny Streamlink (Livestreamer Fork) Ao amin'ny Ubuntu na Linux Mint Via PPA
Tahaka ny tsy hitazonana ny Livestreamer, noho izany dia noforonina vao haingana ny fako, antsoina hoe Streamlink. Tsy misy kitapo Ubuntu ho an'ny fangatahana vaovao, noho izany dia nandefa Streamlink ho an'ny main WebUpd8 PPA aho. Ny PPA dia mampiasa ny fonosana Debian Livian, izay nantsoina hoe Streamlink, noho izany dia ...
SafeEyes miaro anao amin'ny làlan-jaza rehefa miasa amin'ny ordinatera
SafeEyes dia fampiharana izay miezaka ny miaro ny masonao amin'ny tebiteby (asthenopia) amin'ny fampahatsiahivana anao mba handraisana fanapahan-kevitra mandritra ny ora maro ao amin'ny solosaina. Noforonina ho loharanom-baovao malalaka sy malalaka Linux ho an'ny EyeLeo, fampiasa Windows iray fotsiny. SafeEyes dia ...
Ny Desktop Gmail Client 'WMail` 2.0.0 Stable dia nalefa
WMail dia maimaimpoana maimaim-poana ny birao Desktop ho an'ny Gmail sy Google Inbox, azo alaina ho Linux, Windows, ary Mac. Ny fampiharana dia rakitra ho an'ny Gmail / Google Inbox miaraka amin'ny fanohanana ny kaontiny tsy voafetra, ankoatr'izany dia manampy ireo karazana toy ny fampandrenesana Desktop (fampahafantarana ...
Ny Prime Indicator Plus dia Mora Mivadika eo Anelanelan'ny Nvidia sy Intel Graphics (Nvidia Optimus)
Ny Endrika Indeksana dia AppIndicator amin'ny ordinatera miaraka amin'i Nvidia Optimus, mamela ny mpampiasa hanova haingana ireo sary eo amin'ny Intel sy Nvidia. Tsy navaozina hatramin'ny volana Febroary, ny 2015, ny orinasa Praiminisitra voalohany. André Brait no nameno ny mari-pamantarana (raha mampiasa code avy amin'ny Linux Mint version), manatsara azy ...
SpaceView: Endri-tsoratry ny fampiasana ny rakitra Ubuntu
SpaceView dia endriky ny Ubuntu izay mampiseho ny fampiasana ny solosaina, noforonina ho valin'ny fanontaniana AskUbuntu. Ny AppIndicator dia mampiseho lisitry ny fitaovana ao amin'ny menio, ary tsindrio eo amin'ny iray amin'izy ireo dia mametraka izany ho toy ny default, mampiseho ny toerana malalaka mivantana eo amin'ny ...
FunYahoo ++: Plugins vaovao Yahoo ho an'ny Pidgin / libpurple [PPA]
Yahoo dia nisintona ny sariohatry ny Messenger taloha ho an'ny iray hafa, nifanaraka ny fampiharana amin'ny fampiharana fampiharana hafa, toy ny Pidgin, ny fiaraha-mientana, sy ny sisa. Eion Robb, ilay mpandrindra ny SkypeWeb ary ny Hangouts, dia namorona takelaka fikandrana Yahoo prpl antsoina hoe FunYahoo ++, izay miasa miaraka amin'ny Yahoo vaovao ...
Ny AIs Google dia mianatra ny fomba hanatsarana ny hafatr'izy ireo manokana
Ny tambajotra vaovao dia afaka mamorona sora-bolana izay mihamafy kokoa noho ianao manaisotra azy. Ny rafitra Google AI dia nahafantatra ny fomba hananganana ny fanalahidin'ny sehatr'asa manokana, ary mba hampiorenana azy kokoa rehefa avy nanafika. Ny tarika fianarana lalindalina ao amin'ny Google, Brain, dia nanangana tamba-jotra roa, 'Alice' ary 'Bob', ho an'ny ...
Mety hampiato ny fanivanana sasantsasany ambaran'ny vaovao ny Facebook
Ny fiverenan'ny tambajotra sosialy dia tonga taorian'ny fanivanana ny sary ao amin'ny Vietnam Photo Facebook dia nanome alalana ny tsy handraràna sary izay mendri-piderana, na dia mandika ny fenitry ny tambajotra sosialy aza izy ireo. Ao amin'ny lahatsoratra bilaogy, Joel Kaplan, VP an'ny politikam-bahoaka iraisam-pirenena, ary Justin Osofsky, VP amin'ny hetsika manerantany, ...
Banks miandraikitra ny Bitcoins hiarovana ireo fanafihana amin'ny ransomware
Raha misy mandrahona ny handroba rafitra banky, ireo vola madinika dia azo ampiasaina mba handoavana azy ireo Banks sy ireo rafitra ara-bola hafa dia toa mihazona ny Bitcoins, raha toa ka iharan'ny heloka bevava cyber izy ireo, izay mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny azy ireo.
Ny paty iray hafa maika hamaha ny 'critical' flash player player
Adobe milaza fa ny fanavaozana dia hametaka ny vulnerability manan-danja eo amin'ny mpisera Windows Adobe dia nampitandrina ny mpanjifany mba hanavao ny rindrambaiko flash avy hatrany, aorian'ny fijerena ny fahadisoana 'manan-kery' izay efa nobaikoin'ny malware. Ny famoahana fiarovana an-dàlambe navoaka omaly dia mikendry ny ...
Apple dia mamaha ny olana izay ahafahan'ny hackers mifehy ny iPhone, Apple Watch sy Mac
Ny bug CoreGraphics dia nahatonga ireo hackers haka ireo fitaovana Apple tamin'ny alalan'ny fampisehoana sary iray farany farany nataon'i Update an'i Apple izay mamaha olana iray izay mamela hackers hitondra iPhones, iPads sy Macs rehefa avy nampiseho sary ho an'ny mpampiasa. Ny bug, antsoina hoe CoreGraphics, ary navoaka omaly omaly ...
Intel dia manomboka amin'ny Atom E3900 Series ho an'ny Io
Ny drafitra dia novolavolaina mba hanomezana hery sy fahatomombanana bebe kokoa Intel dia nanambara ny faran'ny Atom Processors farany indrindra, izay natao manokana mba hitondra fitaovana IoT amin'ny traikefa niainan'ny fiainana sy ny hery. Ny Intel Atom Processor E3900 Series dia mampiasa teknolojia silicone 14-nanometer mba hiantohana azy io.
Moa ve ny aretin'i Mirai ao ambadiky ny fanafihan'ny Dyn DDoS?
Ny malware IoT mitondra hery dia mety nahatonga ny Twitter, Spotify & Reddit misintaka Mirai, ny malware botneta izay natao ho loharanom-baovao teo am-piandohan'ity volana ity, no voalaza fa tao ambadiky ny fanafihana DDoS izay naka Twitter, Github and Spotify, ankoatra ny zoma . Ny fanafihana, izay ...
Ny Intel Haswell dia misokatra ho an'ny malware
Ny vulnerabilité dia mihatra amin'ny chips Haswell ao Linux, windows, Android, ary iOS mpikaroka avy amin'ny oniversite any Binghamton sy Kalifornia no milaza fa mahita ny mikraoba madinika Intel Haswell mihazakazaka ao amin'ny Linux, Windows, Android ary ny Apple iOS sy MacOS dia manana fahalemena mety hivoaka.
1 2 3 4 ... 53 Manaraka
File Firefox Toetoetra Linux Mint iPhone Bing finday avo lenta fitaovana finday Ubuntu 16 Up " Microsoft taona app store Windows Phone hametraka lalao Ubuntu (rafitra fandidiana) fitaovana rafitra lalao Linux Ubuntu Systems Fitaovana finday CentOS 7 Phone "PC fitaovana Users afa-po raki-daza fikarohana Ubuntu 14.04 WordPress Ubuntu Facebook rindrambaiko vaovao farany Malagasy Bible Chrome tahirin-kevitra SEO command line Linux fanamarinana Windows 10 GNOME IP adiresy Command Plugins bilaogy Android Plugin HTML Time web server endri-javatra Microsoft Windows Apple Watch Database MySQL Debian Windows 04 Support 10 OS X famotsorana famerenana Samsung USB HTTPS PDG Company MAMAKA haino aman-jery sosialy Rafitra fikirakirana CentOS 'App Video fifamoivoizana Nginx Google SSH PPA windows update nbsp ubuntu 15.04 toe-tsaina Ubuntu 14.10 Unité centrale Twitter loharano misokatra Unix Windows 8 Screen bilaogy Server takelaka fikirakirana web browser paoma PHP Samsung Galaxy Cortana Apache API One ' SSD fitaovana YouTube ram Apps HTTP